बीमा संस्थानमा बेथिति, १० वर्षदेखि न अडिट, न साधारणसभा « Bikas Times
१२ फागुन, काठमाडौं । आइतबार गोरखापत्रसहितका केही दैनिक पत्रिकाहरूमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ठुल्ठूला अक्षरमा आफ्नो प्रतिबद्धता लेखिएको विज्ञापन छपायो ।
जहाँ लेखिएको छ, ‘वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा जोखिम व्यवस्थापनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र सर्वसाधारणहरुको आत्मविश्वास जागृत गराउन संस्थानले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै बीमा सचेतना र पहुँच वृद्धिमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’
संस्थानका विज्ञापनमा लेखिएका यी अक्षर पढ्ने हो भने साच्चिकै नेपालको बीमा बजारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यही एउटैमात्रै संस्था हो कि भन्ने लाग्छ । तर, यस संस्थाको वेतिथिको कहानी भने लामजर्दो छ ।
यसमा भएको वेथितिभन्दा पहिले संस्थानकै स्थापनाबारे चर्चा गरौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको पुरानो कम्पनी हो । आइतबार संस्थानले ५२ वर्ष पूरा गरी ५३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विशेष समारोहको आयोजनासमेत गर्‍यो ।
१ पुस ०२४ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमा यस संस्थानको स्थापना भएको थियो । सोही वर्षको फागुनदेखि नै कारोबार सुरु गरे पनि ०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ आएपछि सोहि ऐन अनुसार १ पुस ०२५ मा यसले औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गर्यो ।
स्थापनाको शुरुमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय शुरु गरेको यस संस्थानले ७ फागुन २०२९ देखिमात्रै जीवन बीमा व्यवसाय शुरु गरेको थियो । संस्थामा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंक लिमिटेडको १६.६७ प्रतिशत सेयर छ ।
१० वर्षदेखि न अडिट, न साधारणसभा
आइतबार यसले ५३ औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा विशेष समारोहको आयोजना गर्यो । जहाँ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंलगायत सहभागी भए ।
तर अपशोच, संस्थाको वेथितिबारे बोल्नका लागि समितिका अध्यक्ष चापागाईंमात्रै होइन अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत धेरै समय छुट्याउन सकेनन् । मुलुकमा १९ वटा बीमा जीवन बीमा कम्पनीहरु छन्, त्यसमध्येको एक हो, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ।
तर यसले अन्य बीमा कम्पनीहरुले जस्तो नीति नियमको पालना भने गर्नु पर्दैन । अन्य कम्पनीले सानो गल्ती गरे पनि बीमा समितिले तत्कालै एक्शन लिएर कारबाही गर्छ, तर संस्थानका विषयमा केही निर्णय गर्न सक्दैन ।
यसको पुष्टि गर्न एउटा उदाहरणमात्रै हेरे पुग्छ, यो संस्थाको १० वर्ष अघिदेखि साधारणसभा हुन सकेको छैन । जबकि, कुनै पनि बीमा कम्पनीले हरेक वर्ष साधारणसभा गर्नैपर्छ । संस्थाको आय–व्यव पनि हरेक वर्ष साधारणसभाले पारित गर्नैपर्छ ।
हरेक वर्ष नियामक निकायले स्वीकृत गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण केही वर्षको त संस्थानले बीमा समितिसम्म पुर्याउन नै सकेको छैन ।
यतिबेला आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ७ महिना वितिसकेको छ । तर संस्थाको आर्थिक वर्ष ०६४/६५ को समेत वित्तीय विवरण स्वीकृति हुन सकेको छैन । संस्थाले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि भर्खर बीमा समितिमा पुगेको छ ।
त्यसयताको संस्थाले लेखापरीक्षण तथा वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पुर्याउन समेत सकेको छैन । संस्थाले यस्तो लाचारीपन देखाएर पनि निकै तामझामका साथ आइतबार वार्षिकोत्सव मनायो ।
लेखा परीक्षणमात्रै होइन आफ्नो सम्पतिको समेत संस्थानले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । रामशाहपथमा बजारभाउ अनुसार अर्बौ पर्ने जग्गा तथा आलिशान महलमा केन्द्रीय कार्यालय राखेको छ ।
तर, उक्त जग्गा र भवन संस्थानले आफ्नै दावी गरे पनि अहिलेसम्म त्यस जग्गाको लालपुर्जा संस्थानसँग छैन । यस विषयमा संस्थानका अधिकारीहरु भने मुख खोल्न चाहँदैनन् ।
लेखापरीक्षण नै नभई चलिरहेको संस्था पारदर्शी छ भनेर भन्न सकिने कुनै अवस्था छैन । तर पनि सरकारले संस्थान सुधार्नका लागि कुनै पनि कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।
जनताको मन जित्न कहिल्यै सकेन
सरकारी लगानीको बीमा कम्पनी भए पनि आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएका कारण बीमा संस्थानलाई अहिले पनि सर्वसाधारणले सहजै विश्वास गर्दैनन् । नामको पछाडि संस्थान जोडिएकाले सर्वसाधारणमा यो नियामक निकाय नै हो कि भन्ने भ्रमबाहेक यस स‌स्थालाई विश्वास गर्न सकिने आधारहरु छैनन् ।
संस्थानमा भएको वेथितिका कारण आमजनता मात्रै होइन संस्थानमै कार्यरत कर्मचारीहरु समेत विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । आइतबार आयोजित समारोहमा नै संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी कृष्णप्रसाद प्याकुरेलले संस्थानको छवि धमिलिँदै गएको बताए ।
कर्मचारी युनियनको तर्फबाट मन्तव्य राख्न मञ्चमा पुगेका उनले साधारणसभा नहुने र वर्षौदेखि लेखापरीक्षणसमेत नहुनुले आमसर्वसाधारणमा संस्थानप्रतिको विश्वास घट्नुका साथै छवि नै धमिलिएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुन व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनीमात्रै होइन, संस्थानको छवि धमिलिँदै गएको बारे कर्मचारीहरु चिन्तित छन् । तर, कर्मचारी भएका कारण बढुवामा नपरिएला कि भन्ने डरले खुलेर बोल्ने हिम्मत कृष्णप्रसादले जस्तो अरुले गर्न सक्दैनन् ।
आइतबार उनले मञ्चबाटै संस्थाका अन्य वेथितिका कुराहरु पनि उठाए । उनले भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि नहुनु दुखद् भएको बताए । संस्थाका यस्तै कमीकमजोरीका कारण जनताको मन जित्न नसकिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
संस्थाका प्रशासक कविप्रसाद पाठक भने अब संस्थाले जनताको मन जित्ने दाबी गर्छन् । जीवन बीमामा बीमांकीय मूल्याकन नभई लेखा परीक्षण हुन नसक्ने र लेखापरीक्षण नभई साधारणसभा हुन नसकेको संस्थानका प्रशासक पाठकले स्वीकारे ।
उनले यसलाई सुधार गर्ने बताए पनि सुधार्न के गर्ने भन्ने ठोस योजनाहरु ल्याएका छैनन ।
नियामक निकाय भन्छ– बुझाएको फाइल हेर्दैछौं
आइतबार वार्षिकोत्सव समारोहमा पुगेको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले संस्थानको वेथितिका बारेमा खुलेर बोल्न सकेनन् । हुन त, संस्थानकै भोज खान गएका उनलाई त्यहाँ बोल्न अप्ठेरो परेको पनि हुनुक्छ ।
यद्यपि, उनले संस्थाको अवस्था राम्रो भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै दुःख व्यक्त भने गरे । आफ्नो कार्यकालको अन्तिमअन्तिम घडीमा रहेको भन्दै मन्तव्यको शुरुमा नै भावुक बनेका अध्यक्ष चापागाईंले यसअघिको भन्दा केही सुधारको संकेत भने देखिएको बताए ।
‘म अध्यक्ष भएर आएपछि वार्षिकोत्सवमा सहभागी भएको आज चौथो वर्ष हो, सायद यो नै मेरो अन्तिम सहभागिता हुनसक्छ । अबको १० महिनामात्रै मेरो कार्यकाल बाँकी छ,’ भावुक हुँदै अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘पहिले धेरै दुःखलाग्दो अवस्था थियो, केही सुधारको संकेत देखेँ, खुसी लाग्यो ।’
उनले बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पेस भएका कागजातहरु आफ्नै कार्यकालभित्र स्वीकृत भइसक्ने बताए । सम्वोधनकै क्रममा उनले केही वर्ष संस्थाकै साधारणसभामा दिएको निर्देशन पनि अझै पालना नभएको उनले बताए ।
‘संस्थाको अवस्था ठिक थिएन र सुधारका लागि समितिको सञ्चालक समिति नै बसेर निर्णय गर्नु परेको थियो’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय पछि मैले १७ बुँदे निर्देशन यहिँ पढेर सुनाए, तर अझै पुरै कार्यान्वयन भएको छैन ।’ उनले संस्था सुधारका लागि गम्भीर बन्न निर्देशन दिए ।
महालेखा भन्छ– परामर्शसमेत माग गरिएन
बीमा संस्थानको बेथितिबारे महालेखापरीसक्षकले हरेक वर्ष नै प्रश्न उठाउने गरेको छ । हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकले यसको बेथितिबारे प्रश्न उठाउनुमात्रै होइन कारबाहीका लागि तालुकदार मन्त्रालयको सचिवलाई पत्राचार नै गर्ने गरेको छ ।
महालेखाले आफ्नो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विगत वर्षमा लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श दिइए तापनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ०६९/७० देखि ०७३/७४ सम्मको लेखापरीक्षण नै नगराएको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले यो वर्षको लेखापरीक्षण गर्न परामर्श मागसमेत नगरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
लेखापरीक्षण नगराएका कारण संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम आवस्यक कारबाही गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको महालेखाले बताएको छ ।
समयमा लेखापरीक्षण नगराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
सुधार हुनेमा आशावादी छु : अर्थमन्त्री
आइतबारदेखि सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत बनेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा संस्थाको वार्षिकोत्सवको प्रमुख अतिथि थिए । मन्तव्यको शुरुमा नै उनले संस्थानको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।
करिब १८ मिनेट भाषण गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले थोरै समयमात्रै संस्थाको विषयमा बोले भने अधिकांश समय अर्कै विषयमा केन्द्रित भए ।
‘खुसी लाग्यो, तपाईहरुको कार्यक्रममा सधैं यही विल्डिङमा दशकौदेखि यहीँ कुरा सुन्दै आइरहेको छु,’ मन्तव्यको शुरुवातमै उनले भने, ‘यसपालि थोरै राम्रो कुरा सुन्न पाए, आशा छ १० वर्षकै सम्पूर्ण वासलातहरु पारित गराएर साधारणसभा गर्नुहुनेछ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले संस्थान अब सुधार हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै उनले विषयान्तर गरे । संस्थान सुधारका लागि निर्देशनको सट्टा उनले सरकारले बीमाका लागि गरेका र गर्न लागेका कामका बारेमा चर्चा गर्न समय खर्चिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा चरम गरिबीको रेखामूनि साढे १६ लाख नागरिक रहेको तथ्यांक बताउँदै उनीहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा सरकारले गरिदिने बताए । बीमालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले बीमा